China Silicone Keychains fekitori uye vagadziri | SJJ
Silicone Keychains uye keyrings anotambirwa nevanhu pasi rose nekuda kwayo yemhando yepamusoro, yakasimba kwenguva yakareba uye ine mavara mavara. Ivo anoshandiswa kukwidziridzwa, mitambo, zvikoro, mapato uye zvimwe zviitiko.
Silicone Keychains uye keyrings inogamuchirwa nevanhu pasi rese nekuda kwehunhu hwayo hwepamusoro, hunogara kwenguva yakareba uye hunhu hwakajeka. Ivo anoshandiswa kukwidziridzwa, mitambo, zvikoro, mapato uye zvimwe zviitiko. Iyosilicone keychainsuye keyrings yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvakakwana zvekusimudzira sangano rako kana makambani, kuratidza vagadziri mazano nemweya. Saizi dzakasiyana uye kusanganiswa kwemavara zvinoita iyosilicone keychainsuye ma keyringi anodakadza uye anokwezva uye anoyevedza, zviri nyore zvikuru kushambadza marogo kune veruzhinji. Ivo havazotyoka, kana iwo mavara anopera kunyangwe akashandiswa kwenguva yakareba, kuwana yakawanda yepamusoro hupfumi mukana.
Pretty Shiny Zvipo kuburitsa mamirioni esilicone keychains uye keyrings mwedzi wega. Iko kunaka uye nguva yekutungamira zvinorumbidzwa nevatengi vedu. Pls taura nesu chero nguva, timu yedu yehunyanzvi ichabatsira pamapurojekiti ako panguva yekutanga.
Dhizaini: 2D, 3D, rimwe divi, maviri mativi
Colors: Inogona kufananidza PMS mavara, swirl, chidimbu, kupenya-mu-iyo-rima, inokodzera mavara ar
Zvakabatanidzwa: Jump mhete, Makiyi machete, macheni, hoko kana kuteedzera kuraira kwako
Pashure: Silicone Nhare Dzenyaya
Zvadaro: Silicone Mari Mari Bhegi & Silicone mabhegi
China Yakanakisisa Awm Keychain Mafekitori
China Yakanakisisa Awm Keychain Fekitori
China Yakanyanya Mustang Keychain Pricelist
China Yakanyanya Mustang Keychain Quotes
Kufa Kukanda Zinc Alloy Mari
Kupopota Shrilling huku
Kupisa kugadzirisa Rhinestone lanyards